I-Liquid (Amanzi) Level Meter, Radar Current Meter and Flow Meter, China Liquid (Amanzi) Level Meter, Radar Current Meter and Flow Meter Manufacturers, Suppliers, Factory - HNAC Technology Co., Ltd
Ikhaya>Umhlinzeki Wemikhiqizo>Measurement Meters
Amamitha okulinganisa ahlanganisa imikhiqizo emithathu: igeji yezinga likaketshezi (lamanzi), imitha yokugeleza kwe-radar kanye nemitha yokugeleza. Okulandelayo yisingeniso esinemininingwane yemikhiqizo:
I-1.I-Liquid (Amanzi) Imitha Yezinga: Kuyi-gauge yezinga le-radar yamagagasi ye-planar ye-planar engathinteki yokulinganisa izinga lamanzi angaphezulu, okutholwa ubuchwepheshe be-frequency modulated continuous wave radar (FMCW) ukukala izinga loketshezi. Akuthintwa ama-gradients okushisa, umhwamuko wamanzi phezu kwamanzi, ukungcola okusemanzini, nezinsalela ngesikhathi sokulinganisa; i-algorithm elungiselelwe ingenza imiphumela yokulinganisa inembe kakhudlwana, enezimpawu zosayizi omncane, ukufakwa okulula, nokugcinwa okuphansi.
I-2.Imitha Yamanje Ye-Radar: Imikhiqizo isebenzisa i-antenna ye-K band planar microstrip enokugxiliswa kwamandla kanye nokusetshenziswa kwamandla okuphansi. Ihlanganiswe nemisebenzi yesinxephezelo se-engeli eqondile, i-algorithm yokuhlunga isivinini sokugeleza, ukutholwa kwamandla esignali, ukuxhumana kwe-RS485/RS232, ukuxhumana okungenantambo nokunye; Umphumela wokulinganisa isivinini awuthintwa izinga lokushisa nomfutho womoya, futhi izinto zokusebenza azithintwa ukugqwala kwendle nodaka, futhi zithinteke kancane ngomonakalo wamanzi. Ilula ekwakhiweni komphakathi futhi kulula ukuyigcina; Idizayini ekhethekile ye-antenna yenza ukusetshenziswa kwamandla kube phansi kakhulu, kwehlise kakhulu izidingo zokuphakelwa kukagesi, okuyenza ifaneleke ikakhulukazi ukufakwa endaweni lapho kudingeka khona ukuqapha izinga lokugeleza kwesikhathi eside.
I-3.Flow Meter: Iyimitha yokugeleza ezenzakalelayo ngokugcwele esekelwe kubuchwepheshe be-microwave, eyamukelwa ubuchwepheshe be-radar yendiza ye-K-band ethuthukisiwe ukukala isivinini kanye nezinga lamanzi ngendlela engathinteki. Ibala futhi ikhiphe ukugeleza okusheshayo nokugeleza okunqwabelene kwesigaba sesikhathi sangempela ngokuya ngemodeli yesofthiwe eyakhelwe ngaphakathi kanye ne-algorithm. Umkhiqizo unezici zokusetshenziswa kwamandla aphansi, ukwethembeka okuphezulu nokugcinwa okulula; Inqubo yokulinganisa ayithinteki izinga lokushisa, inzika, ukungcola kwemifula, izinto ezintantayo nezinye izici.
Izindawo zokufaka isicelo samamitha wokulinganisa wegeji yezinga loketshezi (lamanzi), imitha yokugeleza kwe-radar kanye nemitha yokugeleza:
1. Imitha Yezinga Loketshezi (Amanzi):
A. Hydrology inhlolovo yemifula, amachibi namadamu;
B. Umfula, umzila wokunisela, ukulawulwa kwezikhukhula nokunye ukuqapha izinga lamanzi;
C. Ukulawulwa kwezikhukhula zasemadolobheni, ukugawulwa kwamanzi nokunye ukuqapha izinga lamanzi;
D. Ukuqapha izikhukhula zemvula ezindaweni ezinezintaba;
2. Imitha yamanje ye-Radar:
A. Isixwayiso kusenesikhathi kanye nokuqapha kwezinhlekelele zemvelo;
B. Ukuqapha imifula nemithombo yamanzi;
C. Hydrology survey of river course, imisele yokunisela kanye nokulawulwa kwezikhukhula;
D. Indle yokuvikela imvelo, ukuqapha inethiwekhi yamapayipi endle;
E. Ukulawulwa kwezikhukhula zasemadolobheni, ukuqapha kwezikhukhula zemvula yasezintabeni, njll.
3. I-Flow Meter:
A. Ukulinganisa isivinini, izinga lamanzi noma ukugeleza kwemifula, amachibi, amagagasi, imisele yamachibi, ukuchithwa kwemvelo, uxhaxha lwamapayipi angaphansi komhlaba, imigudu yokunisela, njll;
B. Ukusiza imisebenzi yokuhlanza amanzi, njengokuhlinzekwa kwamanzi emadolobheni, ukuqapha indle, njll;
C. Ukubala kokugeleza, ukuqapha kokungena nokuphumayo, njll.